कुलमान नदोहोरिउन्, उज्यालो नहराओस् — newsparda.com
कुलमान नदोहोरिउन्, उज्यालो नहराओस्
मिलन बगाले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदलाई कुलमान घिसिङले गरिमामय बनाइदिएका छन्। को आयो र को गयो अत्तोपत्तो नहुने पदको ‘देशै चलाउने’ जस्तो गरी चर्चा हुन थालेको छ। २०७३ सालभन्दा अगाडिको एक दशक नेपालमा एउटा अनौठो व्यापार फस्टायो। लोडसेडिङ तालिकाको व्यापार। तालिका चोकचोकका स्टेशनरी पसलमा रु.५ देखि १० सम्म तिरेर किन्न पाइन्थ्यो।
निरन्तर फेरिरहने तालिका खोज्दा हैरान भएपछि म गोरखापत्रको ग्राहक बनेको थिएँ। तर, तालिका आउने दिनको गोरखापत्र बारम्बर हराउँथ्यो। अनि स्टेशनरीबाटै तालिका किन्न बाध्य हुन्थें। एकै ठाउँमा तालिका टाँस्दाटाँस्दा भित्तो एक बित्ता मोटायो कि झैँ लाग्थ्यो।इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुँदै जाँदा विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटमा पनि नियमित रुपमा तालिका आउन थाल्यो। तालिका सजिलै पाउँदा मन फुरुङ्ग हुन थाल्यो। तर, १८ घण्टे लोडसेडिङ हट्ला भन्ने सोचसमेत आएन। दैनिक ५/६ घण्टा मात्र घट्ला भनेर समेत अनुमान गरिएन।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा ऊर्जामन्त्री बनेका ऊर्जावान गोकर्ण विष्टले केही आशा जगाए। उद्योगधन्दा, मन्त्रालय र मन्त्री निवासतिर समेत बत्ती काटेर दैनिक दुई/तीन घण्टा उज्यालो थपिदिंदा नागरिकको अनुहारमा थोरै चहक थपियो।
त्यतिखेर मैनबत्ती, इन्भर्टर, इमर्जेन्सी लाइट, सोलार बत्ती आदिको व्यापार डरलाग्दो थियो। मैनबत्ती, सोलार र इन्भर्टरले हटाउन नसकेको अन्धकारको डरलाग्दो छायाँलाई कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको केही महीनामै जादू गरेझैं सर्लक्क हटाइदिए। नागरिकको मनमा झलमल घाम बालिदिए।
झलमल उज्यालो देखेर म महीनौँ अलमल परें। के भएको यो? कसरी भएको यो? दैनिक १८ घण्टासम्म किन अँध्यारो विगतमा? आज झलमल कसरी? त्यसको जवाफ नपाउँदै २८ भदौ २०७७ मा उज्यालो निर्माताको चारवर्षे पदावधि सकिएको छ।
निरन्तर उज्यालो बल्नुमा धेरै कारण होलान्। उनलाई पदमा ल्याउने प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीदेखि प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारीको साथ र सहयोग होला। तर, उनी बिदा हुनासाथ फेरि कालरात्रि फर्कने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैलाई छ।
लोडसेडिङमुक्त समाज र कुलमान घिसिङ यति वेला एकअर्काका पर्याय बनेका छन्। बत्ती गए ‘लोडसेडिङ भयो’ भन्न मन नभएर ‘कुलमान गए’ भन्न मन लाग्छ। बत्ती आए ‘कुलमान आए’ भन्न मन लाग्छ। यो मेरो मनको मात्र भाषा होइन। आम सर्वसाधारणको भाषा भइसकेको छ। यो भाषा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकट हुने गरेको छ।
यति वेला कुलमान घिसिङको पक्षमा सिंगो समाज एकढिक्का छ। तर, सरकार एकढिक्का छैन। सत्तारुढ दल एकढिक्का छैन। नेपाली समाजले उनलाई ‘नायक’ मानेको सरकारलाई मन परेको छैन। पुनर्नियुक्ति दिन नागरिकको दबाब चाहिँ परेको छ।
कार्यकारी निर्देशकमा उनी पुनः नियुक्ति हुने/नहुने अन्योल छ। कुलमान हटेर अर्को कोही व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक भए झ्याप्पै बत्ती काटिदिन्छन् र देश अन्धकारमय बन्छ भन्ने भय सर्वसाधारणलाई छ। लोडसेडिङको पीडा मनबाट नहराएकैले कुलमानको पक्षमा जनलहर देखिएको हो।
एउटै व्यक्तिले दीर्घकालसम्म नेतृत्व लिनु राम्रो होइन। व्यक्तिको चमत्कारको मात्र आशा गरियो भने थिति कहिल्यै बस्दैन। बरु त्यही व्यक्ति घमण्डी र निरंकुश बन्छ।कुलमानको नेतृत्वमा विगत चार वर्षदेखि बलिरहेको बत्ती ‘अखण्ड ज्योति’ बनोस् भन्ने आमचाहना छ। यो बत्ती उनले बिदा लिनासाथ धिपधिप नगरोस्। उनले पदको भारी बिसाएसँगै प्राधिकरणले उज्यालो नबिसाओस्। बरु कुलमान आफैंले ‘अब दोहोरिने रहर छैन’ भनिदिए हुन्थ्यो। नेतृत्व हस्तान्तरणको स्वाभाविक चलन विद्युत प्राधिकरणमा बस्नुपर्छ।
कुलमानको व्यक्तित्व अब धेरै फराकिलो बनिसक्यो। खुला समाजमा आएर बत्ती काट्न खोज्नेलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने काममा उनले अब नागरिकलाई सघाउनुपर्छ। एउटै व्यक्तिले दीर्घकालसम्म नेतृत्व लिनु राम्रो होइन। व्यक्तिको चमत्कारको मात्र आशा गरियो भने थिति कहिल्यै बस्दैन। बरु त्यही व्यक्ति घमण्डी र निरंकुश बन्छ।
कुलमानको नेतृत्वमा प्राधिकरणले उज्यालो बालिदिइसकेको छ। सरकारले अब उज्यालोमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न पाउँदैन। लोडसेडिङका निर्माताहरुलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएर फेरि अँध्यारो बाटो हिँड्न हुँदैन।
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदलाई कुलमानले गरिमामय बनाइदिएका छन्। को आयो र को गयो अत्तोपत्तो नहुने पद ‘देशै चलाउने’ जस्तो भएको छ। उज्यालो बाल्ने वा उज्यालो फाल्ने निर्णायक पद मानिएको छ।
त्यही पदमा बसेर उज्यालो बालेका कुलमानको व्यक्तित्वले अरु पखेटा हालोस्। उनले घटीमा ऊर्जामन्त्री बन्ने सपना देखुन्। बत्ती नै नपुगेका अनकन्टार गाउँमा बत्ती पुर्याउने सपना देखुन्। स्थायी लोडसेडिङ भोगेका ठाउँमा बत्ती बाल्न सकून्। उज्यालो बालेको जसले कमाएको यश उनको पूँजी हो। नागरिकलाई प्राधिकरण बाहिरै बसेर जगाउन सकून्। तर, उनी फेरि नदोहारिउन्। बरु कुलमान सम्झेरै कसैले बिजुली काट्न नसकुन्।
तर, कुलमानलाई नियुक्ति नदिएर अरु जोसुकैलाई नियुक्ति दिंदा सरकारले नागरिकको गाली खानेवाला छ। उनैले यदि आफ्ना ‘डेपुटी’को छवि विवादमुक्त छ भने उनैलाई, त्यसो नभए डेपुटीपछिका अर्का उम्मेदवारलाई स्वाभाविक नेतृत्व हस्तान्तरण हुने गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सके भने प्राधिकरणमा थिति बस्न मद्दत पुग्नेछ। कुलमानले थिति बसाल्न सहयोग गरुन्। उज्यालो निर्माता कुलमानको जय होस्।